उपत्यकामा बम आतंक, खोइ सुरक्षा ? - dsnews
उपत्यकामा बम आतंक, खोइ सुरक्षा ?
महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले चुनाव बिथोल्ने समूहले विस्फोट गराएको र प्रहरीले शंकास्पद ४२ जनालाई पक्राउ गरेको बताए। उनले भने, ‘बम रिमोटबाट विस्फोट गराएको आशंका छ । किल्टी वा प्रेसरकुकर बममध्ये एउटामा इम्प्रोभाइज विस्फोट गराइएको हो। पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।’ उनले काठमाडौंमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको बताए। राजधानीका अधिकांश युनिटका प्रहरी यतिबेला सडकमा खटिएका छन्।
Previous गगनको ढाड र कानमा चोट, थापासहित सातजना विस्फोटमा घाइते भएका छन्
Next देशभर ७३ हजार किमि सडक निर्माण